यात्रा संस्मरण : बल्खुदेखि लमजुङ् घलेगाउँ हुँदै भुजुंङ्गसम्म जे देखियो:: लिगलिग खबर
मनोज पराजुली। काठमाडौँ। राजधानीको चिसो चिसो मौसम, पारिलो घाममा बसेर तातो चियाको चुस्की लिन कसलाई पो रहर नहोला र ? चिया गफसंगै काठमाडौँ वरिपरिका ग्रामीण वास्तिहरुसम्म अध्ययन अवलोकन गर्न जाने सोच नआओस् पनि कसरी, सार्वजनिक प्रशासन अध्ययन, त्यो पनि चौंथो सेमेस्टरमा विकास व्यवस्थापन विषय अन्तर्गत ऐच्छिक विषय ग्रामीण विकास लिएर अध्ययन गर्नेहरुका लागि।
पुर्व निर्धा्रित कार्यक्रम अनुसार लमजुङ्को घले गाउँलाई प्रमुख गन्तव्य बनाइ यात्राका लागि निस्कियौं, रिजर्भ गरिएको माइक्रोका साथ। हामीले भ्रमण व्यवस्थापन गर्नका लागि व्यवस्थापन, मनोरंजन र रिपोर्टिंङ् गरि तीन टोली बनाएका थियौं। विधार्थी न हो, रमाइलो अनि काठमाडौँको धुलो धुँवाबाट मुक्ति पाई मुड फ्रेस बनाउन निस्किएको टोली, जब गाडीमा बस्यौं, शुरु भईहाल्यो सांगीतिक माहोल….
दोश्रो दिनको यात्रा घलेगाउँ हुँदै भुजुंङ्सम्म गाडीमा रमाइलो गर्दै उकालो लागियो। विहानको चिसो मौसम अनि ब्रेकफाष्ट लिएसंगै हाम्रो यात्रा बेशीशहरबाट घलेगाउँ तिर उकालो लाग्यो रिजर्भ गरिएको २ वटा बलेरोका साथ ।
घनपोखरा नायुं भन्ने ठाउँमा बिहानको खाना खाने निधो गरिएको थियो। कसैले स्थानीय खाना र कोदोको ढिंडो घ्यु र दुधसंग खाँदाको स्वाद कस्तो थियो भनिरहनु पर्दैन थियो किनकी त्यसको झल्को हरेक पल खांदै सेल्फी लिंदाको हंसिलोपनबाट नै थाहा हुन्थ्यो । खाना पश्च्यातको सांगीतिक माहोल चिसो हावाको स्पन्द जो कोहीका लागि रौनक नै थियो।
चिसो मौसम त्यो पनि घलेगाउँको रात बेलुकीको खाना आत्मीय मिलन, कता कता पारिवारिक भोजन जस्तै लाग्ने …
Tags: घलेगाउँ हुँदै भुजुंङ्गसम्मयात्रा